ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်အပြင်ဖက် သီးသန့်တဲအိမ်စုတ်အတွင်းမှာသာ အိပ်စက်ခွင့်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ(ရုပ်သံ) – ျမန္မာသတင္းစံု
ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်အပြင်ဖက် သီးသန့်တဲအိမ်စုတ်အတွင်းမှာသာ အိပ်စက်ခွင့်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ(ရုပ်သံ)
Posted on March 12, 2021 Author admin	Comments Off on ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်အပြင်ဖက် သီးသန့်တဲအိမ်စုတ်အတွင်းမှာသာ အိပ်စက်ခွင့်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ(ရုပ်သံ)
နီပေါနိုင်ငံဟာ မိန်းကလေးအများစု ရာသီလာချိန်တွေမှာဆိုရင် သီးသန့်တဲအိမ်လေးထဲမှာ နေထိုင်ရတဲ့ဓလေ့တစ်ခုရှိကြောင်း Parwati Bogati အမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြထားပါတယ်။ Parwati Bogati အမျိုးသမီးဟာလည်း မိန်းကလေးတိုင်း တစ်လတစ်ခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် တဲအိမ်လေးထဲမှာ ခုထိနေနေရတာပါ။အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာစဥ်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ သီးသန့်တဲအိမ်လေးကို သူတို့တွေက “Chhaupadi”လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ဆောင်းရာသီရောက်လို့ အေးစက်နေတဲ့ ညအချိန်တွေဆိုရင် မွန်းကျပ်နေတဲ့ တဲအိမ်လေးထဲမှာ မီးမွေးပြီး သူတို့ကိုသူတို့နွေးထွေးအောင် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကို လူတွေ ၊တိရိစ္ဆာန်တွေ ၊အပင်တွေ ၊အသီးအရွက်တွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း၊ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကို လုံးဝပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ ဓလေ့တွေကလည်း ယဥ်ကျေးဖွယ်ရာ ကောင်း ပါတယ်။
နီေပါႏိုင္ငံဟာ မိန္းကေလးအမ်ားစု ရာသီလာခ်ိန္ေတြမွာဆိုရင္ သီးသန္႔တဲအိမ္ေလးထဲမွာ ေနထိုင္ရတဲ့ဓေလ့တစ္ခုရွိေၾကာင္း Parwati Bogati အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာျပထားပါတယ္။ Parwati Bogati အမ်ိဳးသမီးဟာလည္း မိန္းကေလးတိုင္း တစ္လတစ္ခါ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အရာတစ္ခုေၾကာင့္ တဲအိမ္ေလးထဲမွာ ခုထိေနေနရတာပါ။အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာသီလာစဥ္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ သီးသန္႔တဲအိမ္ေလးကို သူတို႔ေတြက “Chhaupadi”လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ေဆာင္းရာသီေရာက္လို႔ ေအးစက္ေနတဲ့ ညအခ်ိန္ေတြဆိုရင္ မြန္းက်ပ္ေနတဲ့ တဲအိမ္ေလးထဲမွာ မီးေမြးၿပီး သူတို႔ကိုသူတို႔ေႏြးေထြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြကို လူေတြ ၊တိရိစာၦန္ေတြ ၊အပင္ေတြ ၊အသီးအ႐ြက္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ျခင္း၊ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို လုံးဝပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါတယ္။သူတို႔ေတြရဲ႕ ဓေလ့ေတြကလည္း ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ ေကာင္း ပါတယ္။
မလှောင်ပါနဲ့သားရယ် ရှက်စရာမဟုတ်ပါ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်တယ်….. သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့။ ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ်က မသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကို သွားပြီး အဘွားတစ်ယောက်ကို သွားမေးတယ်……. လူငယ် > ဘွားဘွား တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ? ဘွား၂> ရပါတယ်… မေးပါ သား…. လူငယ် > ဘွားဘွားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီး မလာကြတာလဲ..? သားတို့ မြို့ကြီးက လူတော်တော်များများက ဘုရားဖူး သွားကြရင် ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ကြတယ်…။ ဘွား၂> ဒီလိုကွဲ့သား…အဘွားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ.ဘုရားဖူးဖို့. ဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်မှ ဖူးရမယ်လို့ […]